Snn Nepal जम्मु काश्मीरमा कोरोना माहामारीविरुद्ध महिला स्वास्थ्यकर्मीको मेहनत – Snn Nepal
काठमाडौँ । जम्मु काश्मीरमा कोभिड १९ विरुद्ध महिला स्वास्थ्यकर्मी लामो समययता कडा मेहनतका साथ खटिएका छन् ।
जम्मु काश्मीरमा कोभिड १९ को शुरु भएयता नै महिला स्वास्थ्यकर्मी निरन्तर खटिएका छन् । इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एण्ड न्यूरो साइन्स काश्मीरको सहाययक प्रोफेसरसमेत रहेकी डा. सदाकत रेहमान गत वर्षयता नै कोभिडविरुद्ध खटिइएकी छन् ।
काश्मीर क्षेत्रमा गत वर्षदेखि कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा उनी खटिएकी हुन् । गत वर्ष सन् २०२० मार्च यता कोभिड संक्रमित अस्पताल नै आफ्नो घर भएको डा. रेहमानले बताएकी छन् ।
हाल कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिनुभन्दा महत्वपूर्ण कुनै काम नरहेको उनले बताईन् । श्रीनगरस्थित स्किम्स अस्पतालमा कार्यरत नर्स सविना रेहमतले विगत केही महिनायता अफ्ना महिला सहकर्मीसहित कोभिड १९ विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा काम गरिहेको बताईन् ।
अस्पताल र कोभिड संक्रमित बिरामी नै आफ्ना घर परिवार जस्तो बनेको रेहमतले बताएकी छिन् । कोभिड १९ को माहामारीविरुद्ध जम्मु काश्मीरमा अधिकांस अस्पतालमा नर्स तथा महिला स्वास्थ्यकर्मी लगातार काम गरिरहेका छन् । स्रोत : ईण्डिया ब्लूम्स